Home Wararka Qatar oo markii u horeeysay sheegtay inay daneynayso Soomaaliya oo wadajirta
Qatar oo markii u horeeysay sheegtay inay daneynayso Soomaaliya oo wadajirta
Iyada oo dhawaan la soo gaba-gabeeyay shirkii lagu heshiisiinayay wadamada Khaliijka iyo dalka Qatar ayaa dowlada Qatar waxa ay balan-qaadaty in ay faraha kala baxeyso dhibaatooyinka ay ka waday waar kamida wadama Carabta oo ay u horeeyaan Soomaliya, Liibiya iyoo Siiriya. Danjire Alya bint Ahmed Al Thani Wakiilka joogtada ah ee Qatar u fadhiya Qaramada Midoobay ayaa soo jeedisay sida ay u daneyneyso Dowladdeeda nabadgalyada Qaaradda Afrika, ilaalinta xuquuqda aadanaha & garabsiinta dalalka heerka hoose taagan.
Dhanka kale Alya Waxa ay caddeysay in uu jiro rabitaan xooggan oo guud ahaan caalamka si gaar ah qaaradda Afrika ay u daneyneyso Dowladda Qatar si ay ugu qayb qaadato aasaaska nabad waarta oo meesha ka saarta xaaladaha liita ee marwaliba laga soo sheegayo dalalka qaar. Hadalka ka soo yeeray Qatar ayaa waxauu dhawac ku yahay Farmaajo iyo Fahad oo in mudo ah Gacanta u galiyay dalka Soomaaliya dowlada Qatar iyaga oo lacag ku badashay qaranimada Soomaaliya.
Haweeneydaan Qadar ku metasha Qaramada Midoobay oo ka qaybgashay kulan gaar ah oo looga hadlay Xaaladaha dalalka caalamka gaar ahaan dhinacyada amniga & bani aadamnimada oo la isaga xog wareystay sidii loo gacan qaban lahaa.